Best VIDY mgbanwe
Best Buy price VIDY $ 0.000587 VIDY/ETH Gate.io
Ahịa ahia kacha mma VIDY $ 0.000623 VIDY/USDT Huobi Russia
VIDY ọnụ ahịa mgbanwe ego ego na-ekpebi ọnụego mgbanwe. O dabere n’onyinye ma choro crypto a. Mgbanwe crypto dị iche iche nwere oke azụmaahịa azụmaahịa. Ọ dị mfe ịghọta na VIDY ọnụego mgbanwe ego ego n'otu n'otu na-ahaziri ọnye mgbanwe crypto ọ bụla. Anyị Best VIDY mgbanwe peeji na-ahọrọ azụmahịa azụmaahịa na mgbanwe ego niile nke ụwa ma gosipụta nke ugbu a kachasị mma. VIDY ịzụrụ ma ree ọnụego.
Best VIDY obere akpa
June 06, 2020 Kachasị mma ịzụta VIDY na June 06, 2020 Ọnụ ahịa kacha mma VIDY na $ sell_pair ụzọ azụmaahịa na $ sell_market ahịa.
Mpempe akwụkwọ kachasị mma VIDY bụ echiche onwe onye nke ndị sonyere n'ahịa crypto na ndị na - ejide crypto. Mpempe akwụkwọ Crypto bụ mmemme dị mgbagwoju anya nke echekwara ego ego. A na-ejikwa obere akpa ahụ maka ịkwụ ụgwọ, maka mbufe nke mkpụrụ ego crypto. Mpempe akwụkwọ ego crypto nwere oke nke: ntụkwasị obi, ịdị mfe, nchekwa. Anyị na-amụ ahịa VIDY ahịa mgbanwe ego ego ego, anyị wee họrọ azụmaahịa kachasị mma maka ịzụ na ire.
Ụlọ ahịa VIDY kacha mma
Ọnụ ego kachasị mma maka ịzụrụ, ire ego ego VIDY na 06/06/2020 taa anyị gosipụtara tebụl ndị dị n'elu maka ịdị mfe nghọta. Na tebụl a, ebe egosiri na VIDY ego ego ego, ị nwere ike ịhụ nke ọma ọnụahịa nke VIDY na nyochaa nke kachasị mma. N'ihi nke a, họrọ nke ị ga - eji agbanwee mgbanwe kacha mma. Ọrụ anyị "ọnụahịa Kachasị mma VIDY nke taa 06/06/2020" na-enye gị ohere inyocha ọnụego niile kachasị mma n'ụwa niile na ntanetị. VIDY ọnụahịa zụrụ ahịa kachasị mma - anyị na-egosi na dollar n'agbanyeghị ego ejiri zụọ ahịa azụmaahịa ahụ.
USDT BTC HT ETH
Tebụl na-egosi taa ọnụahịa VIDY nke ọ bụla site na netwọk ego ego. A gbanwere ọnụego mgbanwe maka ọnụọgụ abụọ abụọ na dollar US.
Huobi Korea VIDY/BTC $ 0.000613 $ 255 -
Huobi Korea VIDY/USDT $ 0.00061 $ 106 -
Huobi Korea VIDY/HT $ 0.000603 $ 41 -
Huobi Global VIDY/USDT $ 0.000613 $ 162 650 -
Huobi Global VIDY/BTC $ 0.000612 $ 12 866 -
Gate.io VIDY/USDT $ 0.000612 $ 20 500 -
Gate.io VIDY/ETH $ 0.000587 - -
MXC VIDY/USDT $ 0.000621 $ 444 510 -
Huobi Russia VIDY/USDT $ 0.000623 - -
Hotbit VIDY/USDT $ 0.000607 $ 25 720 -
UPEX VIDY/USDT $ 0.000619 $ 62 597 -
Huobi Indonesia VIDY/USDT $ 0.000612 $ 12 629 -
A na-edobe ọnụego ịzụta kacha mma VIDY mgbe ịzụrụ ego na-abụghị ọkọlọtọ ma ọ bụ ego ego ndị ọzọ. Ego o kacha zụta VIDY na dollar, ego ọ gbanwere na azụmahịa ahụ. Na ibe dị n'akụkụ nhọrọ kacha mma VIDY, ego ndị ahụ na-enye ọnụahịa azụmaahịa kacha mma na-egosipụta. N'aka nri nke ọnụahịa ire kacha mma bụ njikọ dị na onye na-echigharị ebe azụmaahịa ahụ na ọnụahịa kachasị mma nke VIDY were.
Ulo ahia “uzo abuo” gosiputara ego nke enwere ike ree VIDY. Nmegharị kacha mma maka ịzụ ma ọ bụ ire VIDY dị na tebụl ọrụ anyị. A na-egosikarị mgbanwe mgbanwe crypto ọnụ na ọnụego mgbanwe kacha mma, ire, zụta VIDY. Nyocha nke mgbanwe ego dị iche iche n'elu tebụl nke mgbanwe ego ego kachasị mma na-enye gị ohere ịhụ VIDY azụmahịa azụmahịa na ego ego ọzọ ma ọ bụ ego mba.